निरौलाको अर्को ठगी : हुँदै नभएको रेडियोको नाम भजाएर ब्रम्हलुट ! - Sagarmatha Online News Portal
सोलुखुम्बु । हिमाल एफ.एम.सुन्ने तपाई मध्ये धेरैलाई थाहा होला ‘नेपालको आधा भूभागमा हिमाल ९०.२ मेगाहर्ज, रेडियो एभरेष्ट ९७.७ मेगाहर्ज र खुम्बु एफ.एम.९३.२ मेगाहर्ज’ यो त उसको नारा नै हो ।
तर यथार्थमा न हिमाल एफ.एम.नेपालको आधा भूभागमा सुनिन्छ, न बारम्बार नाम लिईरहने रेडियो एभरेष्ट र खुम्बु एफ.एम. सञ्चालनमै छन् । हिमाल एफ.एम.ले भन्ने गरेको यी सब झुट हुन् । बजारबाट विज्ञापन बटुल्न उनले स्रोता र विज्ञापन दाताको आँखामा छारो हालेर ठगी गरेका मात्र हुन् ।
जत्ति कार्यक्रम प्रसारण हुन्छन् ती हिमाल एफ.एम. ९०.२ मेगाहर्जको तरङ्ग पुग्ने ठाउँमा मात्र सुन्न सकिन्छ । उनको यो झुटको खेतीबाट सबैभन्दा बढी खोटाङ, ओखलढुङ्गा लगायत सोलुखुम्बुभन्दा बाहिरी जिल्लाका स्रोता तथा विज्ञापनदाता ठगीमा परेका छन् । सोलुखुम्बुका अधिकांशलाई हिमाल एफ.एम.बाहेक बज्दैन भन्ने थाहा भएपनि बाहिरी जिल्लाकालाई ३ वटा रेडियोबाट प्रसारण हुन्छ भन्दै विज्ञापनको चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन् ।
‘हामीलाई त तीन वटा रेडियोमा प्रसारण हुन्छ, नेपालको आधा भूभाग र इण्डियामा समेत सुनिन्छ भनेर रेडियो कार्यक्रम फुत्काएर लग्यो, सोलुको रेडियोलाई कार्यक्रम दिंइदा खोटाङका रेडियोले हामीलाई नदिएर बाहिरी जिल्लाको रेडियोलाई किन दिएको भनेर च्याप्छ’ खोटाङका एक जनप्रतिनिधीले भने ।
हिमाल एफ.एम.ले खोटाङ तथा सोलुखुम्बुका केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँगको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
हिमाल एफ.एम.ले हाकाहाकी बोल्दै आएका ४ झुट !
झुट नं. १ नेपालको आधा भूभागमा सुनिने
हिमाल एफ.एम.ले रेडियो सुन्ने स्रोतालाई यत्ति सम्म पङ्गु बनाउँछ कि, मानौं रेडियो सुन्नेलाई नेपालको भौगोलिक अवस्था नै थाहा छैन । रेडियोले हरेक पटक भन्ने गरेको नारा हो ‘नेपालको आधा भूभागमा हिमाल एफ.एम…..’ उसले भने झैं आधा भूभागमा सुन्ने रेडियोको प्रसारण क्षेत्र कम्तीमा ३७ जिल्लामा पुग्नुपर्छ । भानुभक्त निरौला प्रमुख रहेको यो रेडियोले आफ्नो प्रसारण क्षेत्र समेटिएको नक्सामा समेत १८ वटा जिल्ला पूरै र ७ वटा जिल्ला आंशिक गरी २५ जिल्लामा सुन्न सकिने दाबी गरेको छ । उसैको दाबीलाई पत्यार गर्दा समेत भनाई र रखाई विवादास्पद छ । यथार्थ कुरा त के भने, हिमाल एफ.एम.को टावर पत्तालेमा स्थानान्तर गरेपछि लिखुपिके गाउँपालिकाको चौलाखर्कमा समेत यो रेडियो प्रष्टसँग बज्दैन ।
झुट नं. २ अस्तित्वमै नभएको रेडियोको नाम
निरौलाको रेडियो हिमाल एफ.एम.ले उच्चारण गरिरहने रेडियोको नाम हो रेडियो एभरेष्ट ९७.७ मेगाहर्ज । तर यो रेडियो कहीं कतै पनि अस्तित्वमा छैन । न यो रेडियो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ, न जिल्लामा कुनै संरचना नै बनेको छ । यो रेडियो कतैं दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि कहीं कतै पनि बज्दैन । र पनि यो रेडियोको नाम भजाउन भने छाडेका छैनन् उनले । निरौला स्वयंले २०७३ कार्तिक १४ गते पिके डाँडाको ४,२०० मिटरको उचाईबाट रेडियो प्रसारणमा आउने भनेर पोष्ट गरेका थिए । तर उक्त रेडियो समेत प्रसारणमा नआई खारेज भएको बताईन्छ ।
बरु रेडियो पिके सञ्चार प्रा.लि. ले २०७१/०७२ मा रेडियो पिके सोलुखुम्बु भनेर दर्ता गरिएको थियो । १००० वाट क्षमताको उक्त रेडियोले ९८.१ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको देखिन्छ । यस्तै समृद्धि ग्रामीण सञ्चार अभियान नामक संस्थाले १०० वाटको रेडियो २०७१ वैशाख २८ गते दर्ता गरेको भेटिएको छ । माउण्ट एभरेष्ट नाम राखेको उक्त रेडियो समेत प्रसारणमा नभएकाले निरौलाले विज्ञापन दातालाई झुक्याउन मात्र उक्त रेडियोको नाम लिएको प्रष्टै देखिन्छ ।
झुट नं. ३ खुम्बु एफ.एम.मा समेत प्रसारण हुने दाबी
सोलुखुम्बुको नाम्चेबाट प्रसारण हुने खुम्बु एफ.एम. ९३.२ मेगाहर्ज २०७० साल साउन २० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको हो । १०० वाट क्षमताको उक्त रेडियोको इजाजत हिमाली सञ्चार लिमिटेडले नै लिएको हो । तर हिमाल एफ.एम. ९०.२ मेगाहर्जले खुम्बु एफ.एम.बाट समेत प्रसारण हुँदै गरेको दाबीे सरासर झुट हो । खुम्बु एफ.एम.करिब तीन/चार महिना यता बन्द रहेको खुम्बु एफ.एम.का टेक्निकल कोअर्डिनेटर छिमी शेर्पाले सगरमाथा अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले हिमाल एफ.एम.सँग सहकार्य गर्ने विषयमा भने कुराकानी भईरहेको बताए ।
झुट नं. ४. पूर्वी नेपालको सर्वोत्कृष्ट रेडियो
‘पूर्वी नेपालको सर्वोत्कृष्ट रेडियो’ हिमाल एफ.एम.को यो अर्को झुट हो । हिमाल एफ.एम.लाई अहिलेसम्म राम्रो र उत्कृष्ट रेडियो भनेर राष्ट्रिय स्तरको कुनै पनि संघसंस्थाले सम्मान गरेको भएपनि यसो भन्न सक्ने हक राख्न सक्थ्यो । कि त व्यापारिक रेडियोहरुको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एसोसियन नेपाल (बान) ले उत्कृष्ट भनेर प्रमाणपत्र प्रदान गरेको भए पनि उसले निर्विवाद यो भन्न सक्थ्यो । र पनि अरु कसैले तपाई भनोस् या नभनोस् आफै मपाई भएर हिमाल एफ.एम.ले स्रोता माझ भ्रम छरिरहेको छ । पूर्वी नेपालमा वर्षौ पुराना, स्थापित र सयौं पुरस्कारबाट पुरस्कृत रेडियोहरु सप्तकोशी एफ.एम., बीएफ.एम. लगायत छन् । ती रेडियोहरुले समेत पूर्वी नेपालको सर्वोत्कृष्ट भनेर भनेका छैनन् ।
अब अनुमान गरौं, आफू भन्दा सयौं गुणा विद्धतवर्गले सुन्ने रेडियोबाट भानुभक्त निरौलाले दैनिक चार वटा झुट दशौं पटक हाकाहाकी बोलिरहन्छन् भने लुकीछिपी तरिकाले कति झुटको खेती गरिरहेको होला ? यिनलाई पाता फर्काउने कसले हो ?
Published On: ८ असार २०७७, सोमबार